August 2016 – Page2– Rohingya Language Foundation
Civil Rights Movements For Burma President Mr Htay Lwin Oo Opslået af Nai Anwar Kmw på 13. august 2016
by Aman Ullah Moshe Yegar and Early Muslim Settlement in Burma By Aman Ullah [Moshe Yegar, wasaSecond Secretary at the Embassy of Israel in Rangoon during early 1960s. During his stay in Burma he submittedathesis on the subject “Muslims in Burma” for my M. A. degree to the Hebrew University, Jerusalem. His […]
Say, “If the sea were ink for [writing] the words of my Lord, the sea would be exhausted before the words of my Lord were exhausted, even if We brought the like of it asasupplement.”-Sura Qáf: Aiya 109 Hoó, “Zodi añár Rob or hotá ókkol [lekí bélla] doijja cíyai ó, añár Rob or hotá […]
Myomin Khant Myomin KhantFollow June 21, 2015 · ဒူးနာရောဂါ သတိပြုစရာ ••••••••••••••••••••••••••••• အသက် ၅၀ ကျော် လူကြီး တစ်ဦးသည် အပြင် သွား စရာ ကိစ္စရှိသဖြင့် သွားပြီး အိမ်ပြန်ရောက် သည့်အခါ တိုင်း ခြေဆေးလေ့ ရှိသည်။ အပြင်ထွက်ပြီး ပြန်ရောက် တိုင်း ခြေဆေးလေ့ ရှိသည်မှာ သူ၏ အကျင့်ဖြစ်သည်။ မကြာမီပင်သူ့မှာ ဒူးနာရောဂါ ဖြစ်လာသည်။ ဖြစ်စက ဒူးထဲမှ ညောင်းသလိုလို ခံစားရပြီး လှေကား အဆင်း အတက်များသော နေရာတစ်ခု သွားပြီးနောက်တွင် သိသိသာသာ နာလာသည်။ ထို့နောက် တွင်တော့ သူ့မှာ ဒူးနာရောဂါ စွဲသွားတော့သည်။ စွဲသွားသည် ဆိုခြင်းမှာ ဒူးနာရောဂါ […]
1990 Multi-Party Democracy General Elections and the Rohingyas’ Enfranchisement By Aman Ullah “The elections of 1990 are an important landmark in the modern history of Burma. After three decades… almost three decades…of military dictatorship, finally the people of Burma were going to be able to vote foragovernment of their choice. The elections of […]
Insáni Hókuk ólla Duñra duñri “သူ” === နားမနေ ပျားပမာ စိတ်ဓာတ်က သံမဏိ။ စံပြုထိုက်သူ မျိုးမြတ်နွယ် ချီတက်နိုင်စေ ပန်းတိုင်ထိ။ #ယျာတင်_ရိုဟင်းသား# “Ibá” ==== Nozira, Modúfuk or dhóil Dil mon dasé, Fulat or dhóil Mesál luwaza íbare, Háandani guccír Muúm míkka farouk zai, Moksót or thíkana #Yatin_Rohingya by Mg Sein လူပုံကနုနု Manúic sailé norom norom စိတ်ဓါတ်ကမာမာ Dil mon sailé doró […]